Faalooyinka I Dooro aan ku dilee iyo I Dooro aan ku dayacee oo noqday kuwa ugu xiisaha badan Madasha Mbagathi”Muxuuse ka yiri Qoraagii qalinka u qaatay”warbixin.
Maalmahii la soo dhaafay Madasha shirka Mbagathi waxaa gelgelay labo faalo oo la Magac baxay I Dooro Aan ku dilee iyo I Dooro Aan ku dayacee kuwaas oo si weyn ergadda uga sheekeeynayaan micnaha ay xambaarsan yihiin iyo aragtidooda ku aadan qoraalkaas.
Labadda faalo oo mida hore lagu jaheeyay Cabdi Qasim Salaad Xasan ayaa loogu Magac daray I Dooro aan ku dayacee halka tan labaadna lagu soo qaatay C/llaahi Yusuf waxaa iyadana ciwaan looga dhigay I Dooro aan ku Dilee”oo malaha qoraha faalooyinka uu ku cabirayay in dalka ay dhib ku hayaan labadaas oo uu sii kala qaaday marka la eego biyo dhaca faaladiisa oo lagu yiri Dalka waxaa dhib ku hayo labo shaqsi oo kala ah Dayace iyo Dile .
Marka uu soo qaadanayo qoraagga Micnaha Faalooyinka waxaa uu tilmaamayaa in Cabdi Qasim Salad Xasan uu dalka iyo dadkaba dayacay meel cidlaana uu uga tagay xilkii loo dhiibay ee uu u hayay Umadda Somaliyed kaas oo ahaa fursadii ugu qaalisaneed ee Shacabka soo martay hasse ahaatee qoraaga marka uu dhinaca Cabdi qasim ku iftiimayay inuu yahay nin beeylah ka dhigay xilkii lagu aaminay ee uu dhaartay hadana waxaa uu muujinayaa dhan ka kale oo uu ka soo muuqdo nin kaas ka sii ba,an oo la magacbaxay I Dooro aan ku dilee kaas oo uu ula jeeday C/llaahi Yusuf Axmed oo uu ku sifeeynayay in siyaasadiisa ama damaciisa uu yahay mid ku jaan go,an I dooro kadibna aan ku dilo.
Hadaba arrinkaan aan arartiisa hore ka soo sheekeeynay ayaa noqday mid gilgilay xitaa Labadda nin ee laga qoray kadib markii Ergadda ku tilmaamtay Faalooyin fikir dheer kadib asiibay boog loo baahnaa in la tuujiyo marka la eego sida ay maqaaladaas magaca kore ee hordhaca uga run sheegeen shaqsiyadda labadaas mas,uul .
Marka dhinaca kale laga eego faalooyinkaas saameeynta ay yeesheen kuma koobna ergadda oo qura hasse ahaatee waxaa intaas dheer qoraalo dhinaca Emailka ah iyo Afkaaro kala duwan oo ay dhiibteen aqristayaasha sheekooyinkaas dhuuxay kadib. waxana ka soo qaadan karnaa qaarkood oo aan ka xasuusano oraahdooda”weli lama arag qoraa ama saxaafi si cabsi la,aan ka muuqato u soo daabacay shaqsiyadda hogaamiye kooxeed wuxuu yahay in badan afka lagala meermeerayay” waxayna ku tilmaameen faalooyin lagu yaqiin inay soo daabacaan saxaafiyiin Reer Galbeed ah laakiin hadda ay tani tahay mid ku cusub masraxa warbaahinta Afrika gaar ahaan tan Somaliya oo gabigood u kala muuqday koox koox la safan iyo kuwo naftooda u baqaya.
Hadaba markii ay sheekadda labadaas faalo igu noqotay qisa aan iga dhamaan oo inta badan igu soo laalabato ayay danta igu qasabtay inaan dib u qooraansado qoraaga faalooyinkaas Fahad Yasiin Xaaji Dahir oo ay markii dambe ii suurtagashay inaan helo waxaana ugu horreeynba weeydiiyay markaad qoreeysay faalooyinkaan Muxuu ahaa qasadka aad ka lahayd?
Waxaa uuna kaga jawaabay su,aashaas”qasadka koowaad waxaa uu ahaa umadda Somaliyed waxaa ay ku jirtaa marxaladdii kala guurka “oo burburka laga soo guurayay dowladana Geedigga loo ahaa”markaas waxaa danta igu qasabtay in mar kale dowladda la dhisan doonaa aysan lumin ama jidkeedda ka weecan”waxayna danta igu qasabtay inaan la hadlo xildhibaanadda baarlamaanka si aan ugu dhaho”dayace aragnaye dile naga ilaaliya,oo noo raadiya na daryeele.
Marka labaad ayaan weeydiiyay maxay saameeyn kugu yeelatay qoraalkaadda kadib?
Fahad Yaasiin Xaaji Dahir wuxuu yiri”labo qodoba ma fileeynin”mida koowaad marna xisaabta iiguma jirin in faalooyinka noqonayaan kuwo sidaas shacabka u gilgila oo in kabadan boqol iyo labaatan Email oo ah kuwo I leh waad hagaajisay ee halkaa ka sii wad iyo kuwo iyagana I leh madaxdii dalka meel hoowga dhicin iyo kuwo ii hanjabayo intaba .
Tan labaad waxaanan fileeyn aqristayaasha sida ay u soo dhaweeyeen iyo saameeynta baaxada leh ee ay ku dhex yeelatay anigoo faalooyinkaas ka kasbaday labo moowjado oo is garab socdo kuwaas oo ah saaxiibo cusub oo taageerayaal ah iyo cadaw cusub oo seefta ii sita intaba hasse ahaatee faalooyinkaan ma ahayn kuwo aan ku faafiyay warbaahino fara badan oo waxaan ku koobay seddexda shabaakadood ee kala ah”Somalitalk.com”burtinle Online iyo Waagacusub.com waxaana soo raacayay wargeyska AYaamaha ee muqdisho oo isaga dhib weyn kala kulmay maadama degaanka uu ka howl gala uu yahay meel aysan ka degsaneeyn sharci dalka kala haga .
Waxaa Diyaariyay Dahir Abdulle ALasow(dahiryare)
Qoraalkii daahir Yare ee hore...